केपी शर्मा ओली शुक्रबार, पुस २४, २०७७, १५:५३
हामीलाई उहाँहरू जस्तो गाली गलौज गर्ने र दन्तबझान गर्ने फुर्सद छैन। हामीलाई देश विकास गर्नु छ। हामी कुरामात्र गरिरहेका छैनौं।
देशमा अहिले संकटजस्तो अवस्था देखिएको छ। संघीयता जाने भयो‚ संविधान जाने भयो भनेर केही व्यक्तिहरू कराइरहेका छन्। पचास वर्षअघि गणतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेको थिएँ। अनि अहिले गणतन्त्रवादी होइन भन्नेहरू छन्। उनीहरूका नानीभन्दा नाना ठूलो र मान्छेभन्दा कुरा ठूला छन्।
केहीले सोचेका होलान् हामी हटेपछि अब पार्टी कसरी चल्छ भनेर दुई चार जना मान्छे हिँडिरहेका छन्। पिलो निचोरिएको जसरी निचोरिँदैमा देशका जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने उद्देश्य कमजोर हुँदैन। नुहाउँदा पनि दुई चारवटा केस झरेर जान्छ‚ के हुन्छ?
५४ सालमा पनि चोइटिएर जानेहरू थिए। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु- १० वटा सिट ल्याएर देखाउनुस्। उहाँहरू ठूल्ठूला कुरा गरिरहनुभाछ।
जसलाई छोरी‚ बुहारी र आफन्तको मतलब छ। यो पार्टी छोरी बुहारीको पार्टी होइन‚ यो पार्टी नेपाली जनताको पार्टी हो। पहिला उहाँहरूका आँखा आफन्ततिर होइन देशतिर फर्काउनुहोस्।
उहाँहरूको ध्यान जति सबै छोरी‚ ज्वाइँ‚ सम्धी‚ सम्धिनी‚ सालो‚ नाती आदिमा ध्यान छ। मेरा पनि आफन्त होलान् तर मैले मेरा १ जना आफन्तलाई टपक्क टिप्दै राख्दै गरेको एक जना देखाइदिनुहोस्। काम लाग्छ कि भनेर मैले प्रचण्डलाई ल्याएको थिएँ। मैले पहिल्यै पनि भनेको थिएँ। धेरै साबुन स्याम्पु सकियो तर जस्ताको तस्तै। यो बानी जस्ताको तस्तै। उद्देश्य जस्ताको तस्तै। मति जस्ताको तस्तै।
लाटोकसेरो झलल्ल घाम लागेको बेला बाहिर देख्न सक्दैन। अँध्यारोमा चल्ने‚ अँध्यारोमा हिँड्ने‚ अँध्यारोमा बाँच्नेहरू उज्यालोमा टिक्न सक्दैनन्। त्यसैले यस ठाउँमा लाटोकँसेराहरू टिक्न सक्दैनन्।
देशका लागि काम गर्ने नदिएकाले विघटन भइसकेपछि पनि फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने होइन। चुनाव हुँदैन भनिरहेका छन् केही व्यक्तिहरू। म फेरि दोहोर्यासउन चाहन्छु- चुनाव वैशाख १७ गते नै हुन्छ। चुनाव वैशाख २७ गते नै हुन्छ।
खराव तत्वलाई तपाईंहरूले यहीँ ठेगान लगाउनुपर्छ। माथि गए भने दुःख दिन्छन्।
विदेशीका इशारामा काम गर्ने तत्वलाई गाउँ गाउँबाट ठेगान लगाउनुस्। उनीहरूलाई केही गर्नै पर्दैन। त्यस्ता तत्वलाई भोट नहाले पुग्छ।
हाम्रो देश गरिब छ। आफ्नो भूमिसमेत दावी गर्न नसक्नेहरू आँत्तिएका छन्। उहाँहरूलाई मिल्नै नसकिने त्यस्तो के पर्योो? म अध्यक्षमा चुनाव लडेर आएको हो। मेरै समर्थनमा १५ वर्ष माधव नेपाल अध्यक्षमा रहेका हुन्। पछि मसँग अध्यक्षमा लड्न खोज्नुभो अनि हार्नुभो।
मैले उनलाई २९ सालमा मोरङमा पढ्दै गरेको अवस्थामा भेटेर राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्दै ३२ सालमा राजनीतिमा ल्याएको हो। अहिले चाहीँ उहाँ सिनियर रे। केपी ‌ओली जेलमा पर्दा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य थिएँ रे। अनि म त जेलमा थिएँ। जेलमा हुँदा कसरी कमिटीमा पर्ने? म झापा आन्दोलनमा पार्टीको प्रमुख थिएँ।
आजकल प्रचण्ड एउटै गीत गाउँदै हिँड्दै हुनुहुन्छ। तीनवटा भोटा पहिला फटाएको छु मैले‚ मलाई पहिलो अध्यक्ष छाड्दिनुस् भन्नुभो अनि मैले मानिदिँएँ रे। म ८ वर्ष जेल बसिसकेको थिएँ जब उहाँ ३८ सालमा गोरखामा मास्टरी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। २७ सालमा म जेलमा परिसकेको थिएँ। म २५ सालमा सुस्ता महेशपुरका विषयलाई लिएर आन्दोलन गरेर पक्राउ परेको मान्छे हो।
कहिले हो २०२५ साल भनेको पुष्पकमल दाहाल जी थाहा छ? कति क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो? वहाँले राजनीतिक शब्द सुन्नुभएको थिएन होला जब म संघर्षको मैदानमा थिएँ।
पुष्पकमल दाहाल उहाँ उमेरमा मभन्दा ३ वर्ष जेठो हुनुहोला तर राजनीतिमा १० वर्ष जेठो हो म। अनि तीनवटा भोटो रे! अलिक चाहिने सुहाउने कुरा गर्नुपर्छ नि।
जाली कुरा पनि कति। संसद भंग भइसकेपछि अविश्वास प्रस्ताव लानुभो। ढिलो भइसकेपछि मसँग छिटै आएको हो प्रस्ताव भनेर सही गरेछन्। किर्ते गर्नेको आदत जून ओहोदामा पुगे पनि बानी हट्दो रहेनछ। केपी ओलीलाई झुठ बोल्नु छैन।
हामी पञ्चायती तानाशाही भएका बेला त्यसलाई ढालेर अहिले यस ठाउँमा आइपुगेका छौं। पञ्चायत ढालेर‚ राजतन्त्र ढालेर अहिले संघीय गणतन्त्र ल्याएका छौँ। यो व्यवस्था हामीले ल्याएका हौं।
(धनगढीमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा प्रधानमन्त्री ‌ओलीले गरेको सम्बोधनको संपादित अंश।)
सांसदले कोरोना खोप लगाएर मात्रै संसद भवन छिर्न पाउने सांसदहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएपछि मात्रै संसद भवन प्रवेश गर्न पाउने भएका छन्। सोमबार, फागुन १७, २०७७